Ugu dambeyntii Microsoft ayaa ku jawaabay in ay saamiga guud ee cabashada in la sii kordhaya marka ay yimaadaan oo dhan versions of Internet Explorer ku guuldareysteen inay uga bogato user kama dambaysta ah. Windows 10 halkan waa in la hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee Browser farshaxanka Edge in ugu dambeyntii ka bedeli doono IE buuxda marka ay timaado mustaqbalka updates iyo horumarka. Hore u yaqaan oo ka shaqeeyay sidii Project Sparta browser leeyahay eegno gebi ahaan cusub oo hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay in lagu gundhig in la hubiyo in user helo dhadhan dhabta ah waxa internet dhirta yahay oo dhan ku saabsan. Ma aha oo kaliya ka shaqeynayaan, laakiin user ayaa sidoo kale awood u yeelan doonaan in la hubiyo in ay videos iyo walax kale waxaa daawaday hab ah in uu yahay sida ugu fiican ee jeer oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ayaa sidoo kale awood u yeelan doonaan in ay helaan kuwa muuqaalada in weli ay tahay in la muujiyo sida browser Edge sida functionalities kale ee Windows 10 oo aan la bilaabay in buuxa iyo qaababka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in aanay ku adkaanaysa user ay u xukumi in waxa Microsoft ayaa darbay kuwa isticmaala oo dhan kuwaas oo khaati by IE oo aad rabto shirkadda si loo bilaabo wax cusub oo xiiso badan. Tutorial waa dhan oo ku saabsan isticmaalka Edge iyo sida user a faa'iido ka browser heli kartaa in la hubiyo in natiijooyinka ugu fiican laga helo arrintan la xiriira.
Qeybta 1: Brand qaababka cusub ee Windows 10 Edge browser
Qeybta 2: Cinq anciennes versions de VLC Suur Mac
Qeybta 3: Cinq anciennes versions de VLC Suur Mac
Ka dib markii qaar ka mid ah sifooyinka ayaa lagu soo daray browser Edge iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in shirkadda ayaa xaqiijiyey in sifooyinka ugu wanaagsan waxaa gundhig iyo la sameeyey isticmaalka halka horumarinta browser this:
1. muujinayo bogagga internetka
Waa mid ka mid ah awoodaha ugu fiican oo u oggolaan user si loo muujiyo iyo annotate bogagga internetka in ay yihiin booqday inta badan ah. User xaq u baahan yahay si loo hubiyo in qalin iyo warqad icon la riixi in la sameeyo loo baahan yahay iyo inta kale waxaa loo sameeyaa by browser laftiisa oo dhan. Browser laayeen ayaa sidoo kale la dhisay si ay u hubiyaan in user helo inta badan ka soo qaadaan waayo-aragnimo ah in shirkaddu ay ku arsaaqnay
2. Hub The
Sidoo kale waa mid ka mid ah qaababka ugu muhiimsan oo aad u hubiso in user ee hawlaha internet-ka aan la wada ilaaliyo, oo kaliya, laakiin waxay sidoo kale waxaa lagu hayaa in hal meel ka duwan qoraalkii hore ee IE in la soo saaray arrintan la xiriira.
3. Cortana is-dhexgalka
Ku xigeenka ayaa digital ah user in la soo dhowaan la dhisay ee daaqadaha 10 ayaa sidoo kale lagu daray browser ku laayeen oo isticmaalaya habkaani ee gudaha biraawsarkaaga user inay hubiyaan in raadinta internet-ka waxaa la fuliyaa si keeneysa in la fahamsan yahay inuu ugu wanaagsan samayn kartaa . Waxa kale oo ay daaha ka feature ah Cortana in ay sidoo kale qaban karo internet raadinta oo ku hadlaya magaca isticmaalaha.
View 4. Reading
Sidoo kale waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan in lagu daray browser iyo taas oo ka dhigaysa hubiyo in user isha ku hayn karaan articles iyo wararka kale in la akhriyi iyo xayeysiis kale iyo alaabtayda oo maaweeliya ma aha oo kaliya laakiin waa lay soo celiyey oo kaliya marka user uu doonayo.
5. bogagga web Sharing
Waa muuqaal taas oo ka dhigaysa hubiyo in user qaybsada bogga internetka oo uu soo jeclaa in la hubiyo in kale akhristayaasha, saaxiibada iyo xubnaha qoyska ayaa sidoo kale ka akhrisan kartaa alaabta in user maleeyo inuu xiiso leh ka. Habkaani wuxuu ku maqan yahay in browser kale oo kasta oo la isticmaalo:
Qeybta 2: Microsoft geesaha on Windows 10 VS Internet Explorer (IE)
Si aad u kala labadan daalacashada ma aha shaqo adag si ay u qabtaan iyo sabab la mid ah liiska hoos ku qoran hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah browser farshaxanka lagu rakibay marka la barbar dhigo IE ka dhigi doonaa. In kastoo IE jiri doonaan in daaqadaha 10 laakiin feature soo socda ku qasbi doonaa dadka isticmaala si ay u shaqeeyaan Edge:
Feature 1. Reading liiska
Feature ayaa liiska reading ayaa lagu daray gudaha biraawsarkaaga ku laayeen waa sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah muujinta tahay in u ogolaataa user ay u badbaadin articles ee offline isticmaalka iyo in la hubiyo in ay sidoo kale ka heli uu ku jawaabay:
Waxaa dhab ahaantii waa calaamadeysanayaan web in la hubiyo in user hoosta ka qodobada muhiimka ah ee ku qoran bogga internetka ee ah in la booqday dhigi lahaa a. Sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fiican si loo hubiyo in user helo gobolka feature farshaxanka ma joogo ee IE.
3. Pin inuu ku soo bilowdo menu
Edge browser ayaa ka dhisay pin inuu ku soo bilowdo feature menu u ogolaanaya user ay u wareemo bogga gaar ah web ay u menu bilaabatay si fudud oo ku qanacsan tahay iyo waxa ay sidoo kale u ogolaataa user ay u helaan waxa ay ka dib markii loo baahdo.
4. theme Dark
Sida barnaamijyadooda kale oo ka duwan IE fursad u madow theme oo la jecel inta badan isticmaala ayaa sidoo kale lagu daray si loo hubiyo in theme la bedelo sida doonista user.
5. dhirta degdeg ah
Waxaa la damaanad qaaday oo ay tahay mid ka mid ah sababta oo browser laayeen ayaa loo abuuray. Waayo-aragnimo dhirta ayaa la tixraacayo Falanqeynta casriga ah waa si cabsi badan si user ah xaqiiqo fahmi kara waxa ku laayeen version buuxa waa ilaa.
6. NAAFADA KU Flash player
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka muuqaalada tahay taas oo ka dhigaysa in uu user arki kartaa bogagga fudayd iyo qanacsanaanta kuwa aan looga baahnayn ah ciyaaryahanka flash adobe in ay sii wadaan:
Qeybta 3: kooban Tilmaan in ay isticmaalaan Windows 10`s Edge browser cusub
User ayaa u oofin karin tirada hawlaha la isticmaalayo browser laayeen iyo saddexdii ugu muhiimsan ee lagu taxan yihiin hoos:
1. Si loo hubiyo in waxbarashada online waxaa lagu sameeyaa si ugu fiican user a dhaqaajiso karaa hab reading ah browser si loo hubiyo in ugu fiican iyo farsamo ee ugu sarreeya waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in waxbarashada weligood loo jeedin sameeyo:
2. muujinayo bogga internetka ah waxaa hawsha ugu muhiimsan ee jeer oo dhan iyo laayeen ayaa la yimaadaan xal si loo hubiyo in user ayaa muujinaya kartaa dhibcood oo muhiim ah oo ay ku badbaadin karto bogga internetka ee loogu isticmaalo mustaqbalka iyo weliba.
3. webpage ayaa la iskula karaan in ay suuqa kala bilowga menu iyo user u xaqiijiso in uu heli halkaas ka marka loo baahan yahay oo ku salaysan daaqadaha 10 shaqeynta habkaani kuma jiro in browser kasta oo kale oo ku sifayn la mid ah ka dhigi kara.
> Resource > Windows > aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan Browser Microsoft Edge on Windows 10